Ogaden News Agency (ONA) – Shir balaadhan oo lagu qabtay dalka Koonfur Afrika
Shir balaadhan oo lagu qabtay dalka Koonfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ November 27, 2011
Waxaa shir lagaga hadlayay xalada Ogadenia lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalka South Africa shirkaasoo ay soo qaban qabiyeen ururka OYSU kana soo qayb galeen ardayda jamacadaha Koonfur Afrika & waliba saxaafada somaliyeed ee (SOJAS).
Shirkan oo ahaa mid si fiican loo soo abaabulay oo lagu casuumay Ardayda Jamacadaha Cape Town wax ka barta (SEDSA) iyo Ururka Suxifiyiinta ee Soomaalida South Africa (SOJASA) Ayaa waxa uu ka dhacay Xafiiska Uruwaynaha OYSU Ay ku ledahay Cape Town Gaar ahaan Xaafada Bellville .
Shirka ayaa sidii caadada aheyd waxa lagu Furay aayada quraan kariimka ah uu akhriyay Sheekh Maxamed Yussuf(Ugaaska). Sheekha ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada iyo ahmiyada ay u leedahay bulsha walba oo dunida ku nool, wuxuuna ku dheraday sheekha wax barashada iyo muhiimada ay ledahay, siiba marka umad la gumaysto. Waxa uuna Sheekha u sheegay ardaydii iyo dhalinyaradii mesha iskugu timid in ay yihiin hogankii barito.
Waxa Goobta ka hadlay oo kale Xoghayaha OYSU/KA Maxamed Qani, isagoo u mahad caliyay dhaman Ardayda iyo Suxufiyiinta Somaliyed ee Shirka ka soo qayb galay. Mudane Maxamed Qani waxa uu ka war bixiyay waxqabadka Ururka Dhalinyarada & Ardayda Somalida Ogadenia, waqtiga la aasaasay & heerka uu hada marayo ururka, asaga oo shegay in la dhisay ama udbaha loo tagay 27/06/2010 shir lagu qabtay wadanka Dermark. Ahmiyada loo aasasay ururka OYSU ayuu ku sheegay inay aheyd in lagu mideeyo dhamaan Ururada dhalinyarada iyo ardayda Ogadenia ee daafaha dunida ku nool, sidaa ayaana lagu mideeyay. Waxa hada uu xafiisyo ku leyahay ururka OYSU aduunka dacaladiisa oo dhan .
Warbixintaa ka dib ayuu gudoomiyaha wuxuu soo ban dhigay Action Plan kii 2011 ee OYSU qabatay iyo sidii loo hirgaliyay.
Waxa kaloo goobta ka hadlay Naftii hure Nuur Cabdi salaam, oo taabtay muhiimada ay saxafada leedahay iyo sidoo kale ahmiyada ardayda ay u leeyihiin dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda. Wuxuu mudanaha goobta shirka ka shegay in ay jiraan laba Abaarood oo dalka ku habsaday oo kala ah
1) Mid uu Ilaahay kenay oo qadarta Alla ku timid oo la wada yaqaano.
2) Iyo mid uu kenay gumaystaha oo dalka cunaqabaen dhan walba ah saray isla markaana la baxay kaydkii horey beeraha uga soo baxay.
Mida koobaad waa mid Geeska Afrika ku habsatay oo shacabka Somali weyn oo dhan ay la qabaan bulshada Ogadenia, laakiinse bulshada Somalida Ogadenia waxa ay kaga duwan yihiin Somalida xorta ah in wax haya’d samafal gar gaar ah loo diiday inay galaan gudaha Ogadenia, iyo in ganacsigii iyo isu socodkii shacabka Ogadenia iyo Somalida xorta ah oo la xayiray.
Waxaa kaloo shirka lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Somali Journalists Association of South Africa (SOJASA) mudane Maxamed Muuse, isagoo hadalkiisa ku bilabay; saxaafada Somalida ee South Africa waxa ay xiiseeyaan waxa ka dhacayo gudaha Ogadenia, waxayna taageersan yihiin ururka Saxafiyinta SOJASA een gudoomiyaha u ahay saxafad walba oo xor ah una hadasha bulshada dulman ee kow ay ka tahay Somalida Ogadenia. Waxaan idiin sheegayaa ayuu yidhi gudoomiyaha; Saxafada Somaliyeed waxaa iibsaday shaqsiyaad u adeega danahooda oo kaliya oo aan fiirinin danta guud ee somaliyeed ha noqoto Somalida Ogadenia ee gumaysiga madow uu haysto ama Somalida kalee xorta ahba.
Waxaa kaloo uu soo bandhigay Maxamed muuse war bixino badan oo ku saabsan Xadgudub yada iyo Tacadiyada loo gaysto Umada Somalida Ogadenia oo uu qiray in aan laga soo daynin TV Yada , Idacadaha & Website yadaba. Waxa uu Gudoomiyaha SOJASA ka codsaday Maamulka Ururka OYSU Ee Cape town inay u soo gudbiyaan wax walba oo ku saabsan Somalida Ogadenia.
Ka dib; waxaa Shirka lagu soo dhawayay Gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada Jaamacadaha Cape town Somali Education Development of South Africa (SEDSA) Mudane Cabdiqadir Xuseen Cali. Mudanaha ayaa u mahad caliyay casuumada shirka laga casuumay, isagoo sheegay in umad walba waxaa ugu qiima badan ay tahay dhalinyarada. Wuxuuna yidhi; “HADAYNAN AQOON LAHEYN CADOWGENA GARAN MAYNO”. Ardayda Marka ay wax bartaan waxa ayay anfacayaan Naftooda, Dadkooda, Dalkooda & Diintooda. Waxaan ku baararujinayaa ayuu yidhi dhalinyarada S.Ogadenia ee ka baxday D/sare & Kan Dhaxe in ay wax barashadooda kor u sii qaadan Jamacadaha South Africa oy ka fai’daystaan. Wixii cawimaad iyo talo ah na way nala soo xidhiidhi karaan ayuu yidhi gudoomiyaha ardayda Somaliyeed. Wax barashadu waa furaha Dunida .Waxbaro ama wax bar ayuu ku soo gunaanaday.
Mudane Nuuradiin Xuseen Cali Ayaa fikirkiisa Ku cabiray Wuxii Somalida Ogadenia dan u ah ayaa umada somalida u dan ah. Mudane Bulxan oo asagana ka mid ahaa ardayda jamacada Cape town waxa ka dhigta ayaa hadlkiisa ku bilabay; “Waxaan ku faraxsanahay in aan arko urur OYSU oo xafiis leh”. Waxuuna ka dhawaajiyay in xafiiska dhalinyarada loo isticmaalo siyaaba farabadan oo dan u ah bulsha weynta Somaliyeed .
Waxaa kaloo uu yidhi “Your Success is my Success” oo micnahedu yahay “Guushiina waa Guushayda” Waxa aan ku faarxsanahay ayuu yidhi; dadaalka aad wadaan hadad tihiin ururka OYSU iyo halganka ay hogaaminayso JWXO.
Ugu dambayntii Gudoomiyaha Ururka ardayda Jamacadaha Mudane Cabdiqadir Xuseen Cali Ayaa su’ aal uu waydiiyay Xoghayaha OYSU Cape town oo aheyd ; yaa ka mid noqon karo OYSU? Su’aashaas ayuu xoghayaha OYSU Mudane Maxamed qani ka jawabay isagoo yidhi; “Mudane waad mahadsan tahay. ,OYSU Waxa ka mid noqon kara, qof kasta oo xiskiisu dhan yahay, Qaangaar ah, Maandooriye aan isticmalin, Wax danbi ahna aan ka galin bulshada Somalida Ogadenia. Wuxuuna tusay Formkii kamid noqashada ururka OYSU.
Isku soo wada duuboo shirka ayaa waxa uu ku soo gaba gaboobay jawi aad u wanaagsan iyo is afgarad.
Oogle yare/ONA/South Africa/Cape town